/အတန်းအစား = "imagecache-width_250 leftart" "ဘယ်လိုနည်းနဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကြောင်အစာကျွေးဖို့" သင့်ရဲ့ Purring မိသားစုညျ့ဘို့စောင့်ဆိုင်းနေရတဲ့အခါသူကဒီပြည်နယ်သယ်ဆောင်ရန်အဆင်ပြေခဲ့သည်ဒါကြောင့် သင်အရာအားလုံးကိုလုပျဆောငျရမညျ။ ငါတို့သည်စဉ်းစားသင့်ကိုပထမဦးဆုံးအရာ - ဒီကိုယ်ဝန်ဆောင်သောကြောင်သည်, လက်ျာအစားအသောက်များတွင်၏ညာဘက်အစားအသောက်နှင့်ပွဲတော်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအနာဂတ်သားသမီးများ၏ကျန်းမာရေးအပေါ်မူတည်သည်။ ကြောင်အတွက် ကိုယ်ဝန် 65 ရက် (9 ပတ်) ကြာမြင့်ပါသည်။ ဒါဟာမတူညီကြနှင့်မျှမျှတတဖြစ်သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာများ၏ဤကာလအတွင်းခဲ့သည်။ လုလင်တယောက်မွေးဖွားလာသားပေါက်ရန်, ဆဲမိခင်ရဲ့အစာအိမ်အတွက်, ထိုသူအပေါင်းတို့သည်လိုအပ်သောဗီတာမင်နှင့်သတ္တုဓာတ်ကိုရရှိသင့်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သောကြောင်များအတွက်သင့်လျော်သောအစာအာဟာရ၏လိုအပ်ချက်အစားအစာ၏ lumpiness ဖြစ်ပါတယ်။ အကြိမ်မည်မျှနှင့်မည်မျှကိုယ်ဝန်ဆောင်ကြောင်?
မျက်ခုံး Tattoo - ဆံပင် method ကို
တစ်ဦးတက်တူး - သင့်မျက်ခုံးအဆင်းလှသောကောင်းစွာဆောင်ဖို့အသှငျအပွငျပေးစေခြင်းငှါ၎င်း, လိုအပ်သောလျှင်, အခြေခံကျကျဟာသူတို့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အရောင်ပြောင်းလဲပစ်ရန်အတွက် တစ်ခုမှာလမ်း။ အမြင့်ဆုံးမှာသဘာဝကြည့်ရှုအောင်မြင်ရန်မှ၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်နေ့တိုင်းလုပ်-up ကမျက်ခုံးဘို့လိုအပ်ကြောင်းကိုသင်တို့မှသက်သာရာရစေရန်နှစ်အနည်းငယ်များအတွက်တစ်ချိန်တည်းမှာခေတ်မီနည်းပညာ။ နှင့်ဤမျက်ခုံး၏တက်တူးနှင့်အထူးအကျိုးခံစားခွင့်များဆံပင်သာယာလှပတဲ့မင်းသမီးအရေအတွက်၏ဒါခေါ်ပွင့်လင်း method ကိုလူအပေါင်းတို့အားသာချက်များမဟုတ်ပါဘူး။ အမြဲတမ်းမိတ်ကပ်မျက်ခုံးဆံပင်ကဘာလဲ?
လက်ျာ Ovary ၏ မ corpus luteum အကြိတ်အန္တရာယ်မြင့်မိန်းမတို့အဘို့အများအားဖြင့်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော် အကယ်.
Burrs - အဆင်မပြေအများကြီးဆောင်ကြဉ်းသောလက်သည်းပတ်ပတ်လည်အရေပြား၏သေးငယ်တဲ့, စုတ်ပြဲကိုအပိုင်းပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ယခုတိုင်အောင်, အငြင်းပွားမှုများအဖြစ်ကောင်းစွာရှိပါတယ် "burr" သို့မဟုတ် "ဆူး" ဟုခေါ်ရမည်လော တကယ်တော့အဘယ်သူမျှမကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ကိုလည်းမရှိ - နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ရွေးချယ်စရာများသက်တမ်းနှင့်အတူတူပင်ရဲ့တန်ဖိုးကိုရှိသည်။ ပဲ "burr" လို့ပုလ်နာမ်, နှင့် "ဆူး" ဖြစ်ပါတယ် - ။ အမျိုးသမီး လက်၏လက်ချောင်းအပေါ် မ Burrs ရောက်မည်ကိုစိုးရိမ်သည်နှင့်အမျိုးမျိုးသောရောဂါကူးစက်မှုကိုပိုမိုထိခိုက်လွယ်လုပ်ပါ။ ရောင်ရမ်း burrs - တစ်ဦးမနှစ်မြို့ဖွယ်များနှင့်နာကျင်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လက်သည်းအနီးအသားအရေဤအသေးစားအိမ်မှုကိစ္စများကိုလုပ်ကိုင်နေသူပြုပါနှောင့်အယှက်များနှင့်မဆိုနောက်ပြီးလုယူမှီဝဲ။ ဒီအနှောင့်ရှက်ထံမှတခါအများအပြားအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးခံစားခဲ့ရသည်။ burrs ဖယ်ရှားပစ်ရနိုင်ရန်အတွက်စနစ်တကျလက်သည်းနှင့်လက်တို့ကိုပတ်လည်ရှိအရေပြားကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့ဘယ်လိုသိရန်လိုအပ်သည်။ အဘယျသို့ပေါ်လာပါဘူး burrs?
တစ်ခုချင်းစီကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမိန်းမလုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်အနားယူနှင့်အထင်ကြီးနိုငျတဲ့အချက်ပါရှိပါတယ်။ သူဟာ Corporation ခေါ်ကြသည်။ ဤသည်နေ့ရက်သည်ခွင့်ပြုထားသည်အဘယ်အရာကိုကျော်လွန်သွားနှင့်ဖြစ်ကောင်း faceless ဝတ်စုံနှင့်အဖြူရောင်ရှပ်အင်္ကျီနောက်ကွယ်မှပုန်းရှောင်ခဲ့ရသည်ဟူသောစတိုင်, သူတို့ရဲ့နားလည်မှုကိုသရုပ်ပြရှင်းလင်းဖို့နည်းနည်းရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော်အချို့မင်းသမီးတစ်ခါတစ်ရံတွင်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းအတွက်အဆုံးသတ်မထားတဲ့ဗီရိုနှင့်အတူစမ်းသပ်ဖို့တိုက်ရိုက်ကွပ်ကဲမှုကြောင့်ကုမ္ပဏီကိုအဘို့ပွဲရိပ်မိရ။ ထို့ကြောင့်မိန်းကလေး-emo, ဒါမှမဟုတ်ညစ်ညှုးအမျိုးသမီးတစ်ယောက် biker ၏ပုံရိပ်ကိုကြောင့်အတွင်းစိတ်ကမ္ဘာ၏တစ်ဦးရောင်ပြန်ဟပ်မှုဖြစ်ရလိမ့်မည်ပင်လျှင်, အကောက်အခွန်လက်မခံနိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ဘာကိုစားဆင်ယင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များ၏ရှေ့မှောက်၌အကောင်းဆုံးအလငျး၌မိမိတို့ကိုယ်ကိုပြသနေတဲ့ကော်ပိုရိတ်ဖို့ဝတ်ဆင်ရန်နှင့်ထိုသို့လာမည့်နှစ်တွင်မှာဆွေးနွေးထားတဲ့အခါသမယဖြစ်လာဘဲနေရသနည်း ဤသည်ကိုအောက်တွင်ဖြစ်ပါတယ်။ မည်သို့ကော်ပိုရိတ်အတွက်စားဆင်ယင်ကိုရွေးချယ်ပါရန် - အကြောင်းသိကောင်းစရာများ မကော်ပိုရိတ်ပါတီများကတစ်ဦးအဖို့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုစားဆင်ယင်ပါလိမ့်မည်။ လက်တွေ့နှင့်ကြာရှည်ခံမှု၏စိတ်ကူး drop နှင့်မည်သည့်ဝတ်စုံအစုံမဝယ်ကြဘူး။ ဒီအားလပ်ရက်ကာလအတွင်းထွန်းလင်းနှင့်အောင်နိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်, ဒီဟာအကောင်းဆုံးသင့်လျော်ဣတ္်စားဆင်ယင်ဖြစ်ပါတယ်။ အပေါ်ကော်ပိုရိတ်ကော့တေးဆင်မြန်းရွေးချယ်ခြင်း, သင်အောက်ပါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာရန်လိုအပ်ပါတယ်: ကိုဖြည့်ညှင်းသောငှာစောင့်ရှောက်ရန်။ ကိုသင်မည်သို့ချင်ပေမယ့်သင်အောင်မြင်မည်မဟုတ်ကော်ပိုရိတ်တူညီအော်စကာပြုမည်မဟုတ်ပေ။ အဘယ်သူမျှမအနီရောင်ကော်ဇော, နာမည်ကြီးတွေအစားသင်ကတင်းကြပ်သောသူဌေးများကဝိုင်းရံကြလိမ့်မည်ရှိလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာမီးရထား, ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးဖြတ်တောက်မှုနှင့်တင်းကျပ်စွာမထိုက်မတန်စွန့်ခွာဖို့ သာ.
စုစုပေါင်းအိုးတလုံး၏ မဟင်းလျာများ ပို.
မမမခေတ်သစ်အမျိုးသမီးများကို image ကိုအဓိကအဖြစ်လိမ္မော်ရောင်ကိုရွေးချယ်ပါ။ အချည်းနှီးကား!